PSG - PSG: Griezmann muParis, Tuchel anoyeuchidza Henrique kuti arayire - FOOT 01 - TELES RELAY
HOME » SPORTS »Pedyo PSG - PSG: Griezmann muParis, Tuchel inokuyeuchidza Henrique kuti arayire - FOOT 01
rakabudiswa Chishanu 17 May 2019 ku21: 30 In: PSG, Mercato.
Pedyo nechekubva Atletico Madrid, Antoine Griezmann haazokwanisa kushandisa Manchester City kana Paris Saint-Germain.
Kunyange zvazvo kuenda kwake kune FC Barcelona kunenge pasina mubvunzo, mamwe mauto eEurope anoziviswa pamugwagwa weFrench striker. Zvichida nzira yekutaurirana nayo zvakanakisisa zvingaita neBlaugrana. Chero zvazvingava, mutungamiri wenyika Pep Guardiola akaramba zvachose kufarira kwechikwata chake musi weChishanu. Kufanana nomudzidzisi weParis Thomas Tuchel uyo, pakangoitika kuti mutungamiriri wemitambo Antero Henrique aizoedzwa, akayeuchidza kuti anotanga kuvhara firiji.
« Antoine Griezmann anogona kutamba mumapoka ose enyika. Zvinogona kufadza mudzidzisi chero upi zvake uye chero timu kuti tive nayo. Asi panguva ino hazvisi zvokwadi kumushandiraakapindura German. Tiri kutsvaga vatambi, uye kunyanya chaizvo isu tiri kutsvaga vatambi vane mamwe maprofiles. Kutora kwedu kunofanira kuva kwechokwadi. Tinofanira kugadzira timu uye kune mapurogiramu atinoda. Uye ivo vachiri uye vanogara vachidzivirira vatambi. Tinofanira kutanga ipapo. "Tuchel zviri pachena kuti inotaura nezvekugadzirisa zvinhu zvinotarisirwa kubva munguva yekupedzisira yezhizha.
Hope Solo: Mushure mokubudirira uye kukakavara
Switzerland: [Vhidhiyo] L
VANHU & VANHU3,570